ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ဒေါ်ဂျာထွယ်ပန်ဟူသည်မှာ – Youth Bar
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ဒေါ်ဂျာထွယ်ပန်ဟူသည်မှာ
NUG အဖွဲ့အစည်းသစ်မှ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ဒေါ်ဂျာထွယ်ပန်ဟူသည်မှာ
ကချင်တိုင်းရင်းသူလေး ဒေါ်ဂျာထွယ်ပန်သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် The London School of Economics and Political Science (LSE) မှ Social Anthology ဘာသာရပ်မဟာဘွဲ့၊
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ မြောက်ပိုင်းအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ် (Northern Illinois University) မှ M.A. (Anthropology) မဟာဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
ယခင်က မိုင်ဂျာယန်အခြေစိုက် Schools of Intensive English Programs (IEP) ကျောင်းတွင် နည်းပြတစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Institute of Liberal Arts and Science (School of IEP) ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပြီးသုတေသနစာတမ်းများစွာကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
U.S. ကနေ မာစတာကျောင်းပြီးထားသလို UK ကပေးတဲ့ Chevening ချီးဗနင်း စကော်လာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ မိုင်ဂျာယန်မှာကျောင်းတခုတည်ထောင်ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည် စကားပြောနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သည့် လူငယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၁
NUG အဖြဲ႕အစည္းသစ္မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒၚဂ်ာထြယ္ပန္ဟူသည္မွာ
ကခ်င္တိုင္းရင္းသူေလး ေဒၚဂ်ာထြယ္ပန္သည္ ကမာၻ႔ထိပ္သီးတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ The London School of Economics and Political Science (LSE) မွ Social Anthology ဘာသာရပ္မဟာဘြဲ႕၊
အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ ေျမာက္ပိုင္းအီလီႏြိုက္တကၠသိုလ္ (Northern Illinois University) မွ M.A. (Anthropology) မဟာဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္သည္။
ယခင္က မိုင္ဂ်ာယန္အေျခစိုက္ Schools of Intensive English Programs (IEP) ေက်ာင္းတြင္ နည္းျပတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Institute of Liberal Arts and Science (School of IEP) ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၿပီးသုေတသနစာတမ္းမ်ားစြာကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။
U.S. ကေန မာစတာေက်ာင္းၿပီးထားသလို UK ကေပးတဲ့ Chevening ခ်ီးဗနင္း စေကာ္လာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ မိုင္ဂ်ာယန္မွာေက်ာင္းတခု တည္ေထာင္ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမသည္ စကားေျပာႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿပီးလူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္ လူငယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ဧၿပီလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၁
ကိုဝေမိုးနိုင် မိခင် ၏ ဆန္ဒစကား…….